ချီးမြှင့်သောတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - ZHAOQING CITY YUYA METAL PLASTIC PRODUCTS CO ။ , LTD
နေအိမ် > > တံဆိပ် > ဂုဏ်ပြုတံဆိပ်
ချီးမြှင့်တံဆိပ်အတွက်အတွေ့အကြုံ 20+ နှစ်ပေါင်း
ဒီဇိုင်း ဂုဏ်ပြုသော 3D ဆေးတံဆိပ်၊
ပြုပြင်တာတွေ ကြွေထည် 900mmL * 250mmW
နမူနာအချိန် ပြီးနောက် 5-7 အလုပ်လုပ်ရက်ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာလက်ရာများအတည်ပြုခဲ့သည်
ရွေးချယ်ထားသည့်သတ္တုပစ္စည်း၊ ကောင်းသောအလုပ်၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်
ဂုဏ်ပြုတံဆိပ်အားလုံးသည် lanyard, badge နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်
Mold fee be paid before theထုတ်လုပ်မှုof samples
Samples of your own designs ready in 5-7 working days after receiving tooling fee & approval of ourထုတ်လုပ်မှုartwork, freight is either prepaid or collect.
၁။ မေး။ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါသနည်း။
၃။ မေး။ ဘတ်ဂျက်နိမ့်ကျတဲ့အရည်အသွေးမြင့်ဂုဏ်ပြုဆုကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်သလဲ။
6. Q:What is the time frame for sampling or the massထုတ်လုပ်မှု?
Kotar: Generally, it takes 5-7 working days for counter sample and7working days for mass production. The time might be varied subject to theထုတ်လုပ်မှုand quantity.
Hot Tags: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနိမ့်၊ စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ စျေးနှုန်း၊